अनुहार झुर्रियाँ, छाला Saggy हुन्छ र यसको लोच अनुपलब्ध: प्रत्येक महिला ढिलो होस् वा पछि आफ्नो उमेर सोच्न हुनेछ। यी परिवर्तनहरू सबै मुड बिगार्छ र महिला कम अक्सर नजर ऐनामा बनाउन। चिकित्सा को एक अलग क्षेत्र, cosmetology रूपमा जानिन्छ, धेरै वर्ष को लागि, स्वास्थ्य सुधार र वृद्धावस्थाको manifestations विरुद्ध लडाई विभिन्न विधिहरू विकास।
क्षणमा, त्यहाँ गर्न सक्ने धेरै प्रक्रियाहरु छन् "युवा बहाल।" यो थाह भएका मान्छे, सफलतापूर्वक rejuvenated र विशेष सौन्दर्य क्लिनिक आफ्नो पुनर्वास मा संलग्न छन्।
सौन्दर्य - मानव शरीर र तिनीहरूलाई कसरी सच्याउन को सौंदर्य समस्या अध्ययन गर्ने विज्ञान हो। अर्को शब्दमा, हामी उद्योग उमेर-सम्बन्धित परिवर्तनहरू र घाइते परिणामस्वरूप सही कमी उपस्थिति छ भनेर भन्न सकिन्छ। त्यहाँ cosmetology अध्ययन गर्ने दुई मुख्य रुझान हो। यो चिकित्सकीय र शल्य चिकित्सा क्षेत्र। पछिल्लो सौंदर्य समस्या सर्जरी को मद्दत एक व्यक्ति solves। काम मात्र अत्यधिक एक चिकित्सा प्रशिक्षण भएको कला मा कुशल गर्न सक्नुहुन्छ। आधिकारिक पेशा "cosmetologist" एक्लै 2009 मा रूस मा स्वीकृत भएको थियो।
चिकित्सकीय दृष्टिकोण, बारी मा, विभिन्न कस्मेटिक उत्पादन (क्रीम, लोशन, tonics), मसाज, इंजेक्शन, र शरीरमा प्रभाव (लेजर cosmetology, phototherapy, बिजुली धाराहरु) को विभिन्न शारीरिक कारक को मद्दत समस्या सौंदर्यबोध निर्णय। सामान्य मा कमजोरीहरू सही लागि एक विशेष विधि चयन इच्छित परिणाम निर्भर गर्दछ।
छाला कायाकल्प र निको पार्ने विभिन्न प्रकारका के हुन्
माथि हामी यस्तो cosmetology रूपमा विज्ञान दुई क्षेत्रमा देख्यो छन्। यो शल्य चिकित्सा र चिकित्सकीय। सौंदर्य समस्या जटिलता आधारमा र यो समाधान गर्न एक तरिका चयन गर्नुहोस्। सबैभन्दा कठिन र जोखिमपूर्ण प्रक्रिया एक शल्य निर्देशन गर्न भन्छिन् जो प्लास्टिक cosmetology छ। सामान्यतया, यो अपरेसन आवश्यक उपाय, निको वा कायाकल्प अन्य विधिहरू इच्छित परिणाम दिन सक्छ जब छैन। बारी मा, चिकित्सकीय cosmetology छाला को सौंदर्य कमजोरीहरू सच्याउन विभिन्न प्रक्रियाहरु को एक विशाल संख्या समावेश छ। हामीलाई थप विवरण तिनीहरूलाई विचार गरौं।
इंजेक्शन प्लास्टिक अनुहार
हुनत यो चिकित्सकीय cosmetology निर्देशन गर्न भन्छिन्, तर तिनीहरूलाई क्लिनिक मा मात्र एक अनुभवी ब्यूटिशियन आवश्यक लागू गर्न व्यवस्था, यस खण्डको वर्णन गरे। म यस्तो कुरा को रूपमा सुनेका निश्चित धेरै हुँ cosmetology मा, जासुसहरूलाई। यो के हो, राम्रो तरिकाले cosmetologists ज्ञात छ। Fillers - एक पदार्थ (प्राकृतिक वा कृत्रिम), परिचय जो एक झुर्रियाँ गर्न बिरामीको छाला अन्तर्गत अनुभव र sagging छाला मात्रा थप्न।
इंजेक्शन चिकित्सा यी प्रकार आवंटित:
Botulinum। यो प्रक्रिया अनुहार झुर्रियाँ को रोकथाम र सुधार छ। क्युटेनियस पत्र mediators, स्नायु impulses को प्रसारण लागि जिम्मेवार को गतिविधि inhibiting एक पदार्थ शुरू गरिएको छ। यो प्रक्रिया को परिणाम स्वरूप, अनुहार र घाँटी मांसपेशीमा आराम र यसैले झुर्रियाँ गायब। इंजेक्शन प्रयोगको लागि धेरै cosmetology मा ज्ञात जासुसहरूलाई। यो के हो? यो "Relatoks", "बोटक्स", "Dysport", "Lantoks", "Kseomin"।
Plazmolifting। यो प्रक्रिया को नाम प्लाज्मा छाला कायाकल्प र निको लागि प्रयोग गरिन्छ कि सुझाव। रूपमा अचम्मको यसलाई लाग्न सक्छ रूपमा, तर मानव रगतको तरल भाग को संरचना वास्तवमा धेरै उपयोगी छ। यसलाई वर्तमान र hyaluronic एसिड, र कोलेजन र elastin छ। यी घटक सबै युवा र सौन्दर्य को संरक्षण को लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। यो प्रक्रिया को लागि, रोगी लिइएका रक्त प्लाज्मा, यो केही उपयोगी तत्व संग saturate र छाला अन्तर्गत इंजेक्षन।
यस प्रकारको wherein कस्मेटिक एजेन्ट प्रयोग छैन कायाकल्प र निको शरीर विभिन्न तरिकामा, एक विशाल नम्बर, र एक विशेष उपकरण (पराबैंगनीकिरण, microcurrents क्रिस्टल, ज्योति दलहन) समावेश छ। वस्तुतः पीडारहित र धेरै प्रभावकारी यी प्रक्रियाहरु प्रयोग गरी सौंदर्य कमीकमजोरी को उपचार।
सामान्यतया, राम्रो परिणाम हासिल गर्न यो आवश्यक हार्डवेयर cosmetology धेरै पाठ्यक्रम मार्फत जाने छ। विभिन्न सैलून मा प्रक्रियाहरु को एक किसिम पूरा गर्न सक्नुहुन्छ, र अझ राम्रो र लोकप्रिय स्थान हो, अधिक त्यहाँ प्रदान उपचार को सूची हो। पक्कै, सबैलाई सबै भन्दा राम्रो cosmetology क्लिनिक आवश्यक छ। मास्को - यो कहाँ त्यो गर्न निश्चित छ शहर हो। हार्डवेयर विकल्पहरू के हुन्?
यो प्रक्रिया प्रकाश को एक शक्तिशाली धाराको प्रयोग समावेश - लेजर को dermis को तहहरू मार्फत मर्मज्ञ र यसलाई बिगार्न छैन। लेजर cosmetology छाला को अवस्था र बनावट, सुधार गर्न, उमेर स्थलहरू हटाउनु परिसंचरण सुधार दृढता र लोच वृद्धि गर्न मद्दत गर्छ। त्यहाँ एक लेजर प्रयोग गरिन्छ जो दुई आधारभूत प्रक्रिया हो। यो लेजर छाला Resurfacing र आंशिक लेजर cosmetology। मूल्यहरु यी कायाकल्प को प्रकार को लागि लगभग एउटै (लगभग 15 000 दल्नु। प्रति क्षेत्र) छ, र मात्र जोखिम चमकीले प्रवाह को विधि मा अलग (स्थलहरू को रूप मा वा ग्रिड मा)।
अनुहार लागि Microcurrents र शरीर
माइक्रो-धाराहरु प्रयोग कायाकल्प cosmetologists को यो विधि पूरा गर्न। यो प्रक्रिया व्यापक प्रयोग गरिएको छ दुवै रूस र विदेश। microcurrent उपचार लगभग कुनै पनि क्लिनिक cosmetology प्रदान गर्दछ। मास्को - यो कहाँ हरेक ब्यूटी पार्लर कायाकल्प र शरीर रिकभरी को यो विधि भएको शहर हो। यो प्रक्रिया को फाइदा को मांसपेशी फाइबर कार्य गर्न आफ्नो क्षमता हुन मानिन्छ। Mikroudar वर्तमान जहाजहरु लसीका र रगतको प्रवाह रोक, दोस्रो को अंश मा constrict गराउनुहुन्छ। यो प्रक्रिया एक माइक्रो मालिश सकिन्छ। Microcurrents मांसपेशी टोन पुनर्स्थापना र झुर्रियाँ कम गर्न सक्छ। बारेमा 2000 rubles - एक प्रक्रिया को लागत।
सामान्यतया, यो प्रक्रिया आँखा, परेलिहरु, अनुहार, हतियार र भुँडी वरिपरिको क्षेत्रमा लागू गरिएको छ। Thermage - प्लास्टिक सर्जरी को तथाकथित वैकल्पिक तरिका। यो विधि को कायाकल्प मार्फत गरिएको छ जो Cosmetologist र बिरामीको उहाँलाई र प्लास्टिक सर्जरी भिन्नता लगभग नगण्य छ भनेर तर्क।
यो प्रक्रिया छाला को सञ्चालन गर्मी गहिरो तहहरू आधारित स्वामित्व प्रक्रिया हो। कोलेजन समय सेलहरू फैलयो sagging छाला को लागि अग्रणी मा निहित भएकोले यी फाइबर को ताप तिनीहरूलाई फेरि कस र छाप अनुमति दिन्छ। यो क्रम पनि dermis शीर्ष तहहरू बाल्न छैन मा, उपकरण विशेष चुच्चो संलग्न, यो epidermis मा कूलेंट sprayed छ। Thermage प्रक्रिया (Thermage) प्लास्टिक cosmetology रूपमा महंगा छ। मूल्यहरु 100 200 हजार rubles देखि, र कारण उठाने को यस प्रकार को लागि धेरै उपकरण धेरै महंगा छ भन्ने तथ्यलाई गर्न कायाकल्प दायरा यो विधि लागि।
ओजोन प्रयोग कायाकल्प
ओजोन चिकित्सा - पर्याप्त लोकप्रिय विधि। यो प्रक्रिया उपयोगी पदार्थ संग छाला, चयापचय बढाउने, saturate गर्न toxins deduce, ठीक झुर्रियाँ हटाउन र pigmentation स्थलहरू हल्का अनुमति दिन्छ। ओजोन उपचार त ओजोन ककटेल छाला सतह RUB जो रूपमा, इंजेक्शन को रूप मा रूपमा बाहिर। अनुहार, झुर्रियाँ कम सक्षम लागि कस्मेटिक्स एउटा मलम पनि छ, तर इंजेक्शन को परिणाम संग तुलना कम टिकाउ छन्।
संसारको सबैभन्दा लोकप्रिय पेशों एक आज चिकित्सा cosmetology छ। cosmetology विभिन्न विद्यालयमा आयोजित छन् जो पाठ्यक्रम, यो पेशामा मास्टर र क्षेत्र मा एक योग्य व्यावसायिक बन्न अनुमति दिन्छ। नियम, चिकित्सा वस्तुहरू (कस्मेटिक रसायन, जीवाणुतत्व, शरीर रचनाको विज्ञान, डर्म्याटोलोजी, भौतिक चिकित्सा, आदि) यो लागि पढ्न छन्। यसलाई आफ्नो अनुहार मा प्रक्रिया प्रदर्शन गर्ने एक विशेषज्ञ, ठ्याक्कै चिकित्सा cosmetology थाह महत्त्वपूर्ण छ। पाठ्यक्रम त्यसो गर्न सबै आवश्यक सीप सिक्न मदत। अन्यथा यस्तो "मास्टर" मा कस्मेटिक प्रक्रिया विपरीत प्रभाव पार्न सक्छ।
cosmetology किनभने - एक विज्ञान हो, पाठ्यक्रम, यो कठिन यस क्षेत्र मा एक पूरा विशेषज्ञ हुन छ, तर आफूलाई सुरक्षाको लागि, केही ज्ञान अझै पनि आवश्यक छ। आफ्नो प्रशिक्षण को आफ्नो डाक्टर cosmetologist डिग्री सोध्न लजालु नगर्नुहोस्। यो पनि एक विशेष प्रक्रिया लागि contraindications थाहा धेरै महत्त्वपूर्ण छ र यो बाहिर थियो जो मा छाला क्षेत्र को हेरविचार लागि नियम।
म टेनिंग पछि धुन सक्छन्? सही र स्वस्थ तन को रहस्य
Mesotherapy पेट: पहिले र तस्बिर, समीक्षा, फोटो पछि
"काला मास्क" मास्क: समीक्षा
अनुहार मास्क शुद्ध पार्नुहुन्छ। सही लागू
कसरी पुरानो विन्डोज सही हटाउन
प्रोटिन biosynthesis - यो हुन्छ रूपमा?
बियर गर्न झिंगा कसरी तलना गर्न
औषधि "Mezim": प्रयोगको लागि निर्देशन
बस बारेमा 'Betaserk': प्रयोगको लागि निर्देशन
मास्को - माइसिनोनेभ क्लिनिकमा सबैभन्दा राम्रो हृदय रोग विज्ञान केन्द्र
भोलोग्डा: क्लब र रात्रीजीवन